ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းလိုသူများ ဖိတ်ခေါ် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းလိုသူများ ဖိတ်ခေါ်
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ (ယာယီ)မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသည့် ပါတီ၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ခေါ်သည့် အခမ်းအနားတစ်ခုအား ယနေ့နေ့လည် ၂ နာရီ တွင် တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လက်ရှိ တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီဝင်အချို့၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်ရေးလိုလားသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရသည်။
“အခုကတော့ ယာယီပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းလောက်မှာတုန်းက စာတင်ထားပါတယ်”ဟု အဆိုပါ အဖွဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သူ ဦးတင်မြင့်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် အဖွဲ့အစည်းမှ ယခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသများအတွင်းသို့ ကွင်းဆင်း၍ ဒေသခံများ၏ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် ကိစ္စများကို သာ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာများ အပေါ် သုံးသပ်အဖြေရှာမည့် ပုံစံဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
This entry was posted on January 1, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဘီလူးစီးခြင်း (Sleep Paralysis) (ကျန်းမာရေး သုတ)
မြေပုံ မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်စခန်း ဆေးဝါးကုသမှု မရစေရန် RNDP ပါတီဝင်အချို့ နှောက်ယှက် →